Muuri News Network » XOG: Shabaab oo markii looga adkaaday dagaalka oo lasoo baxday xeelad cusub oo..
XOG: Shabaab oo markii looga adkaaday dagaalka oo lasoo baxday xeelad cusub oo..
Hay’adda u dooda xuquuqul insaanka Human Rights WATCH ayaa ku eedaysay kooxda xaqjirka ah ee Al-Shabaab ee ku xiran Al-Qaa’idda ku tumashada xuquul insaanka iyo Askariyeynta Caruurta aan qaan gaarka ah aheyn ee Soomaaliya.
Warbixintii ugu danbeysay oo ay hay’addu soo saartay ayaa lagu sheegay in howsha Askariyeynta caruurta oo ay kooxda Shabaab ka waddo Soomaaliya ay sii siyaaday bilihii la soo dhaafay gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada ay kooxda maamusho,isla markaana ay dhalintaasi aan qaan gaarka aheyn ay ka qeyb geliso dagaalada, waxaa kale oo intaa u dheer hanjbaada aan hore loo arag ee joogta ah ee ay kooxdo ku hayso caruurtaasi.
Waxaay kale oo Human Rights WATCH ay intaa raacisay in wareysiyo ay la yeelatay 15 ka mid ah qoysaska caaruurtaasi la askariyeeyay oo ku nool Saddex magaalo ay Shabaab maamusho oo ku yaal koonfurta Soomaaliya inay qorshahaasi ka soo horjeedaan, isla markaana xoog looga qaato caruurtooda.
Waxayna cadeysay Human Rights WATCH in Caruuurtaasi aay dagaal gelisay kooxda xaqjirka ah ee Al-shabaab day’dooda ay gaarayso 15 jir marka la siiyo tababarna loo adeegso ama ay ka dagaalamaan goobaha ay kooxdo ka dagaalameyso.
Waxaa xusid mudan xuligii Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxmuud uu heshiis caalami ah la galay hay’adda Human Rights WATCH ilaalinta xuquuqda caruurta oo lagu khasbayo kooxdan xagjirka in iney joojiso askariyeynta caruurta aan qaan gaarka aheyn ee Soomaaliya.